Job 29 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Job chetara oge ihe dịịrị ya ná mma (1-25)
A na-akwanyere ya ùgwù n’ọnụ ụzọ ámá obodo (7-10)
Ọ na-ekpe ikpe ziri ezi (11-17)
Onye ọ bụla na-ege ntị na ndụmọdụ ya (21-23)
29 Job kwukwara, sị: 2 “Ọ dị m ka ya bụrụ na ihe a bụ ọnwa ndị garala aga,N’oge Chineke na-eche m nche, 3 Mgbe o mere ka ọkụ* ya na-acha m n’isi,Mgbe m na-eji ìhè ya agafe n’ọchịchịrị,+ 4 Mgbe m ka bụ okorobịa,Mgbe mụ na Chineke dị n’ezigbo mma,+ 5 Mgbe Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ka nọnyeere m,Mgbe ụmụ m* gbara m gburugburu, 6 Mgbe mmiri ara ehi juru n’ebe m na-azọ ụkwụ,Oké nkume ana-agbapụtara m mmanụ ka mmiri.+ 7 Mgbe m na-agabu n’ọnụ ụzọ ámá obodo+Ma nọrọ ọdụ n’ámá,+ 8 Ụmụ okorobịa na-ahụ m nye ohere.* Ndị agadi na-ebilidị guzoro ọtọ.+ 9 Ndị isi anaghị ekwu okwu. Ha na-ekpuchi aka n’ọnụ ha. 10 Ndị a ma ama gbachiri nkịtị. Ire ha tapaara n’okpo ọnụ ha. 11 Onye ọ bụla nụrụ ihe m kwuru ga-ekwu okwu ọma banyere m,Ndị hụkwara m ga-agbara m akaebe. 12 N’ihi na m na-anapụta ogbenye nke na-ebe ákwá ka e nyere ya aka,+Na-anapụtakwa nwa na-enweghị nna na onye ọ bụla nke na-enweghị onye na-enyere ya aka.+ 13 Onye m napụtara n’ọnụ ọnwụ ga-agọzi m,+M mekwara ka obi dị nwaanyị di ya nwụrụ ụtọ.+ 14 M yi ezi omume ka uwe. Ikpe ziri ezi bụụrụ m uwe elu* na ákwà m na-eke n’isi. 15 Abụ m anya ndị ìsì ji ahụ ụzọ,Bụrụkwa ụkwụ ndị ngwọrọ ji aga ije. 16 Abụụrụ m ndị ogbenye nna.+ M na-eleba anya n’ikpe gbasara ndị m na-amaghị.+ 17 M na-akụwa onye na-eme ihe ọjọọ agba, onye dị ka anụ ọhịa nke jidere anụ ọ ga-eri.+ M na-anapụtakwa ndị o ji eji. 18 M na-asịbu, ‘M ga-anọ n’ụlọ m* nwụọ,+Ụbọchị m ga-adịkwa ọtụtụ ka ájá dị n’ala. 19 M ga-adị ka osisi mgbọrọgwụ ya ga-agbasa banye na mmiri,Nke igirigi ga-adịkwa n’alaka ya chi abọọ. 20 E nweghị mgbe a ga-akwụsị ịkwanyere m ùgwù,M ga na-agbakwa ụta m ji n’aka n’akwụsịghị akwụsị.’ 21 Ndị mmadụ ga-ege ntị ka ha nụ ihe m ga-ekwu. Ha ga-anọ jụụ na-eche ka m dụọ ha ọdụ.+ 22 M kwuchaa okwu, e nweghị ihe ọzọ ha na-ekwu. Okwu m na-eru ha n’ahụ́. 23 Ha na-atụ anya m otú e si atụ anya mmiri ozuzo. Ha na-atụsi anya ike ịnụ ihe m ga-ekwu otú mmadụ si atụsi anya ụla mmiri ike.+ 24 M mụmụọrọ ha ọnụ ọchị, ọ na-eju ha anya. Otú m si agbasapụ ihu m na-eme ka obi sie ha ike. 25 M na-enye ha ntụziaka ka onyeisi ha. M bi ka eze ndị agha ya gbara gburugburu,+Ka onye na-akasi ndị na-eru uju obi.+
^ Ma ọ bụ “ndị na-ejere m ozi.”
^ Na Hibru, “gaa zoo.”
^ Ma ọ bụ “uwe na-enweghị aka.”
^ Na Hibru, “n’akwụ́ m.”